Ọrụ Arsiv - RayHaber
Ndi Ngalaba-agbachitere nzuko a
International Rada Radar na Summit Security Summit, ebe ọgbakọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ na-agbachitere, ga-egosipụta ego itinye aka na nchedo ụlọ na nke mba. A ga-atụle S-400 na F-35 na Mgbakọ ahụ, mmepe nke mpaghara na ikike mbupụ iji bulie elu [More ...]
I. Mgbakọ International Transport Ụgbọ njem
On June 18 2019 Istanbul University Faculty of Transport na lọjistik, Turkey Union of Chambers na Commodity Exchanges Association na mmekorita ya na International ụgbọala 'I. Nzukọ Mba Nile Maka Ụgbọ njem Ụgbọ njem. Ebumnuche nke ogbako; ndị na-eme nchọpụta anyị bara uru n'ụwa sayensị [More ...]
Anadolu Isuzu na-aga UITP Stockholm Fair na Sweden
Anadolu Isuzu nọgidere na-ebuwanye mbupụ na 2019. Na-egosi Isuzu Visigo na Isuzu Novociti Ndụ na ụlọ ngosi ihe ngosi, Anadolu Isuzu ka a họpụtara n'oge na-adịbeghị anya na Sweden. [More ...]
III na-elekwasị anya na usoro ụgbọ okporo ígwè Metro. Otu International Metrorail Forum na-eme ka ndị na-eme mkpebi ọha na eze na ndị na-ahụ maka onwe ha zukọta. TCDD Main Support, KGM, AYGM Istanbul Obodo ukwu na Ankara [More ...]
Istanbullight'dan oge mbụ ị ga-ekere òkè n'inye onyinye pụrụ iche!
IstanbulLight, nke bu nani uzo zuru oke n'uwa nke ndi oru uzo, na enye ohere ndi di iche iche na-achota ndi ga-ebute uzo nke mbu n'ime afo a. Ndị Ahịa nke Ahịa nke Ahịa (AGID) na Kọmitii National Turkish for Lighting (ATMK) [More ...]
Zute ndị ahịa gị na IstanbulLight Fair!
12, nke ndị na-arụpụta ngwá ọrụ ọkụ ọkụ (AGID) na ndị isi na Turkish National for Lighting (ATMK) haziri. IstanbulLight International Lighting and Equipment Equipment Fair and Congress, 18-21 September 2019 9 na Istanbul Expo Center. na 10. [More ...]
General Director nke TCDD Burns Green Light ka ụgbọala Systems Engineers
Director General TCDD Mr. Ali İhsan UYGUN zara azịza nke ma ị ga-enye Rail Systems Engineering na EURASİA RAİL Fair kpaliri ụmụ akwụkwọ nke Rail Systems Engineering. Mazi EURASİ RAİL ngosi Dr. Mustafa ILICALI weghaara mod [More ...]
Ndị Nexans Na-enweta Mmasị Na-enweghị Mmasị site n'aka ndị ọbịa na Eurasia Rail 2019
3 kasị ukwuu n'ụwa n'ụwa. Eurasia Rail 2019 özel, nke kachasị mma ụgbọ okporo ígwè ma jidere maka oge nke asatọ n'afọ a, zutere ndị na-eso ya. Nexans, onye ọkpụkpọ ụwa zuru oke na mpaghara telivishọn, dọtara mmasị dị ukwuu site n'aka ndị ọbịa ya. Site na slogan müş Energizes ndụ iler [More ...]
Siemens na-enye ngwaahịa na ngwọta maka obodo ndị mara mma nke ọdịnihu n'okpuru DigitalNetX Networks 7. International Istanbul Smart Grids na Cities Congress na Fair. Ulo oru ume n'uwa dum na Istanbul, na-achikota onodu nke netwọk igwe na obodo ndi ndu [More ...]
UTWU ụlọ ọrụ ndị dị na Eurasia Rail Fair
TER Door Systems na-aga n'ihu ịzụlite usoro ụzọ. Na Eurasia 2019 Rail Systems Fair, ọgbọ atọ nke tram, LRV, metro na ụgbọ ala eletrik na-emepụta nnukwu nlebara anya. Bert 1993 na Germany (Velbert) [More ...]
ABB na-ewebata ihe ngwọta dị iche iche nke anyanwụ na ndị ọbịa ya na Solarex 2019
ABB, Solarex 05, 07-2018 April 11. Na Ngosipụta Uhie Na-ahụ Maka Igwe Uhie na Nkà na Ụzụ, nnukwu ụlọ ọrụ na-agbanwe ihe dị iche iche na ngwongwo ndị nwere ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi maka ụlọ ọrụ mmepụta ụlọ na ụlọ. ABB dị na ụlọ ntu B10-C01 na 02.Hol, [More ...]
Turkey si eduga ndi-eduga ahia ngosi ahazi onye haziri na Turkey n'ime "8. Rail International, Light Rail and Logistics Exhibition - Eurasia Rail tarih e mere n'afọ a na 10-12 April na Fuarizmir ngosi ngosi na Izmir. ụgbọ okporo ígwè [More ...]
Ntụle TCDD ghọrọ Ihe Nlereanya nke Ụgbọ okporo ígwè Eurasia
Turkey nanị na ndị kasị ibu n'ụwa 3. Maka oge mbụ na International Rail and Light Rail Systems na Logistics Fair Eurasia Rail 2019, ndị ọbịa na TCDD gosipụtara mmasị dị ukwuu na Raysimaş na DATEM. Mbụ n'afọ a [More ...]
Eurasia Rail na Izmir Fair KARDEMIR Wind Esti
Okporo ígwè maka usoro oru Yurop region naanị na a maara dị ka otu n'ime ndị kasị ibu n'ụwa ngosi Eurasia okporo ígwè, na okporo ígwè oru na mpaghara n'etiti ndị kasị mkpa-eme ihe nkiri nke 10-12 April 2019 akụkọ ihe mere eme ada ọnụ na fuarizmir. 200 [More ...]
Dursun ve Uygun gara Nlereanya na Eurasia Rail
Deputy Minister nke Transportation na Infrastructure na TCDD General Director Selim Dursun Ali Ihsan kwesịrị ekwesị, 10-12 2019 April ụbọchị na Fair ẹkenịmde ke Izmir, Turkey nanị na ndị kasị ibu n'ụwa 3. okporo ígwè na okporo ígwè okporo ígwè Eurasia Rail 2019 [More ...]
Enwe Mmasị na TÜVASAŞ Dịrị na Eurasia Rail Fair
The naanị oru na Turkey, ndị kasị ibu n'ụwa 3. Ụgbọ okporo ígwè ụwa, Ụgbọ okporo ígwè, Akụrụngwa na Ọdụlọtọ Egwuregwu Eurasia, nke afọ a 8. e mepere Izmir. Selim DURSUN, Deputy Minista nke Ụgbọ njem Na-arụ ọrụ na ọrụ nlekọta nke ngalaba [More ...]
Egwuregwu na Alsancak Station si Tuluyhan Uğurlu
8 kwadoro site Izmir. Maazị Selim DURSUN, onye isi nchịkwa nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ụgbọ njem na Ihe Ọdịdị; Mr. Ali Ihsan UYGUN, Onye Isi Nchịkwa nke TCDD; [More ...]
2020 High Speed ​​Train Nịm na Rails na 10
Siemens Agagharị Transportation Systems Inc. onyeisi oche ma agadi oru Rasim Cüneyt Genç, Siemens emepụta site 7 iberibe ọsọ ụgbọ okporo ígwè tent site kpọmkwem na aka iso rụọ ọrụ na Turkey, "10 set, anyị ga-esi na elu-ọsọ na-azụ anyị iji. Anyị na-emepụta. [More ...]
Istanbul Fair na-ejikọta onyinye nke IMM
Ilar Intertraffic Istanbul fu, onye isi ahia nke uzo ahia nke Eurasia, nke enyere aka na onyinye nke Istanbul Metropolitan Municipality, malitere. Secretary General nke IMM, bụ onye nwere okwu mmeghe nke ngosi. Hayri Baraçlı kwuru, aç Anyị enwewo nghọta maka njikwa obodo na ndị Istanbul na-echekwa oge na ego. na Istanbul [More ...]
Mayor Soyer: ac Anyị ga-ewepụ Network Network okporo ụzọ na 480 Mileage Başkan
Turkey kasị ukwuu ngosi owuwu Izmir Fair, ụwa 3. Eurasia Rail-International bụ ụzọ ụgbọ okporo ígwè kachasị mkpa ma kwadoro ụgbọ okporo ígwè International, Light Rail, Infrastructure and Logistics Fair. Na-ekwu okwu na mmepe ememe nke ngosi, Mayor nke Izmir Metropolitan Municipality [More ...]
Adabara: "Ree na YHT Turkey Service 40 percent nke ndị bi"
Europe na Asia, otu ụwa 3. Iri nke asatọ nke ụgbọ okporo ígwè Eurasia-Ụgbọ okporo ígwè International, Ulo okporo ụzọ ọkụ, Akụrụngwa na Ndekọ Ngwaọrụ e meghere na 10 April 2019 na Izmir Fair Center. TCDD General Directorate nke Ụgbọ njem nwekwara nkwenye ya [More ...]
Siemens Motion Eurasiarail na-emesi njikọ ụgbọelu na 2019 ike
Siemens Agagharị EurasiaRail 2019 onye ga-aga Fair, 'Anyị kpụọ ejikọrọ Transportation "n'okpuru slogan, nwayọọ nwayọọ a ọzọ oké networked" ndị Iweputa njem ilekota "ga-enye digital innovations oru nnochite anya. Ndị a ngwọta okporo ígwè iga ukwuu [More ...]
Automechanika Istanbul Fair Countdown Amalite
3 kachasị n'ụwa. Automechanika Istanbul, ezigbo ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụgbọala, ga-amalite na TUYAP Istanbul Fair na Congress Center n'oge 4-7 April 2019. Turkey si mbupụ mmeri ga-izute akpakanamde ụlọ ọrụ oru Automechanika afọ a na Istanbul [More ...]
Eurasia Rail na-enyere Ndị Mmekọrịta na Ndị Nkwurịta Okwu Dị Mkpa Aka
Turkey nanị na ndị kasị ibu n'ụwa 3. Ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè International na Light Rail na Ejiji Egwuregwu Ezigbo Eurasia Rail ga-eziga ndị ọbịa na ndị ọkà okwu dị mkpa na XIUMX-10 April n'ime mpaghara ngosi nke dị na Izmir. na ìhè ụzọ ụgbọ okporo ígwè na Turkey [More ...]
Kedu ka e si arụ ọrụ ike?
Ụlọ ọrụ Ọmụmụ Mahadum Sakarya (SASGEM) guzobere ogbako na laştır Energy Energy in Transportation: Ụgbọ njem nke ọha na eze. A na-enwe nzukọ na SAU Culture na Congress Center. Nkụzi. Member İfan [More ...]
Ngwongwo Ọkụ Mmiri nke Alstom na Izmir Eurasia Rail 2019
A ghaghị ime 10-12 Eprel 2019 ụbọchị na Izmir, nke kasị ukwuu na mpaghara ahụ, otu n'ime ọhụụ Eurasia Rail kachasị mma n'ụwa ga-ewere ọnọdụ. Ụlọ ọrụ ahụ bụ ụgbọ mmiri mbụ mmanụ ụgbọ mmiri mbụ nke ụwa na-akpọ Coradia iLint [More ...]